Mambokadzi Khalifa, iye mutema iye akatonga hushe hweCalifornia pamberi pezana ramakore gumi nemashanu - Afrikhepri Fondation
Muvhuro, Gumiguru 19, 2020
(Califia, Mambokadzi weCalifornia akanyorwa naArthur Wright)
Mambokadzi Khalifa, mambo mutema uyo akatonga hushe hweCalifornia pamberi pezana ramakore gumi nemashanu
Verenga: 4 min
0 / 5 Cherechedza: 5
Yako peji renji:
LCalifornia ndiyo nyika isingagumi yevatema (Moorish) Calafia inoratidzira. Calafia yaive zita remukuru weumwe neumwe. California yaive nyika yavo. Iye aizivikanwa seganda dema, wedzinza reMoorish, uye akatonga vanhu vatema zviwi, California, Baja, uye Hawaii.
Chitsuwa, inotongwa nevakadzi vechiMoorish. Izvo zvakataurwa muzvinyorwa zvevaKristu muWestern Europe muzana remakore rechinomwe, uye zvakarondedzerwa "Rwiyo rweRoland", apo panotaurwa nzvimbo inonzi Kaliferi, zvimwe nekuti yaive nzvimbo yeCaliph. Ona (Putnam, Ruth (1917) Herbert Ingram Priestley ed California:… Izita Berkeley: University of California.)
Vatongi veSpanish vakataura nyaya pamusoro pemambokadzi asingazivikanwe mutema wechiMoorish akatonga munzvimbo imwechete nhasi.
Khalifa zvinoreva kutonga kwaMwari (mumutauro wechiArabic mutauro).
Nyaya yeCalafia yakazotaurwazve zvakare mubhuku reThe Adventures of Esplandián, bhuku rakanyorwa muna 1500, zvimwe zvichibva pane nyaya dzakatorwa kubva kune vekare vechiMoorish vafambisi vechikepe kubva kuSpain, Portugal, Holland, Belgium uye England.
Calafia yakaunzwa se "... mukadzi wechiMoor, ane hushingi, akasimba uye akakurira mukadzi mutema, akanaka kwazvo pamutsetse wevaridzi akatonga hushe hweumambo hweCalifornia."
Akarayira ngarava yezvikepe uye akachengetedza rugare kune nyika dzakapoteredza, uye zviwi, kusanganisira Baja neHawaii.
Rakanga riine simba zvekuti raigona kumisikidza simba raro renyika kumakungwa kuda. Esplandian inotaura kuti Calafia yakachengetedza hukama uye hwezvokutengeserana hukama nevaMoors ve Africa. Tinotaura nezvehondo dzake mumakungwa eMedithera, muAnatolia, Humambo hweByzantine uye kumaodzanyemba kweEurope. maonero http://en.wikipedia.org/wiki/Calafia#cite_ref-Sabir2004_23-1
Sekureva kwemunyori weThe Adventures yeElslandland:
“Unoziva here kuti, kuruoko rwerudyi rweIndies pane chitsuwa chinonzi California, padyo nepadenga reParadise renyika, raigarwa nevakadzi vatema, vasina murume mumwe pakati pavo, uye vaigara nzira yeAmazons. Vakanga vakasimba nemoyo wakasimba wekuda uye hunhu hukuru (Putnam, Ruth (1917) Herbert Ingram Priestley ed California: .... izita Berkeley: University of California)
Mutungamiriri wechitendero uye akakunda munharaunda yeCalifornia Hernán Cortés nevarume vake vaiziva bhuku racho.
Muna 1535, Cortés akatungamira kudzoka kunyika yeCalafia kana kuCalifornia, ndokufunga kuitumidza zita reSanta Cruz. Zvisineyi, zita iri harinamati, sevatorwa, uye maMoors nevatema maIndia uye maIndia matsvuku nevanofungidzirwa kuti vachena vakapfuurira kushandisa zita rekare uye rekare renyika "California".
Cortés nevanhu venguva yake vanoita sevakashandisawo zita racho. Muna 1550 uye 1556, zita racho rinowanika katatu mumigumo yeCortes yakanyorwa naGiovanni Battista Ramusio.
Saka nekufamba kwemakore, nekukunda kwakawanda, kutapwa uye kubatwa chibharo kweCalifornia, iyo nyika yekare yeMoors yakachengeta zita rayo uye kuzivikanwa.
African America uye Queen Califia
Muna 2004, African American Historical uye Cultural Society muSan Francisco yakaunganidza mambokadzi eCarifia, akapepetwa naJohn William Templeton, achiitira mabasa nevaratidziri vakaita saArthur Wright naJames Gayles; kududzira kwounyanzvi kweCalafia.
"Califia chimwe chezvakaitika muCalifornia, uye zvinosimbisawo chokwadi kuti Cortés paakadoma nzvimbo iyi muCalifornia, aive nevanhu vatema mazana matatu vanaye. Uye mukati mehondo yese yeSpain-Mexico, 300 muzana yevagari vaive vatema. ".
Templeton akaratidza kuti mafurakisi akawanda ekutsvakurudza kuNyika Itsva yaiva Africa, nokuti vaAfrica vaiziva nzira yekuwana Nyika Itsva.
Semuenzaniso, Columbus aive neblack browser. VaMoorish (vatema) vanhu vanga vachienda nekudzoka pakati peAfrica neAmerica kubva mambakwedza enguva. Zvese zvavaifanira kuita zvaiputika kubva kumahombekombe e Africa.
A (African) AmaMoor king Abu Bukari akatora zvombo zve 1.000 muNyika Itsva mumakore e1300.
Epidemics: kutyisidzira kusingaoneki - Documentary (2020)
Uye kana rufu rwange rusipo - Rugwaro (2018)
Library Yezvitendero (PDF)
Makenduru, vahosi-varwi veAfrica
Tarisa Mandela - Nzira refu kuenda kuRusununguko (2013)
POSA NYAYA PANO
Nekudzvanya pane icon, unogona kugadzirisa yako zvinyorwa uye wozvishambadza. Batanidza:
Vanyori, vaongorori, masayendisiti, vari mukati, vezvakaitika kare, mapurofesa uye mablogiki, vanova vanobatsira.
Categories Sarudza chikamu Kuti ibudiswe AFRIKHEPRI-TV KUVA NOKUSHA EBOOKS LIBRARY ugari AFRICAN CUISINE MHURI WEVADZIDZI VEMBA ENTERTAINMENT Documentary VANA ENVIRONMENT URANDA ZVIMWE ZVAKAITIKA BUSINESS FACTS VAFARIDZI VAFRICA MAMVIDHIYO ACHARAMBA NHOROONDO YAKANAKA NOKUTANGA AFRICAN INITIATIONS Registration / LOGIN BLACK INVENTORS AND SAVENTS KINDLE THE VOICE OF KAMA bhukusitoo LIVE TV BHUKU ROKOTENGA AUDIO BOOK Bhuku rePDF VHITSI YEMAHARA MUSIC NEWS, NEWS PARADIGM KAMIT KAMITE KUTI VANHU VAKAFUNA AFRICAN AND SAGES PHILOSOPHY & PSYCHOLOGY Philosophy uye Psychology Health and Medicine PLAYLIST nhetembo PSYCHART Therapy DZIMAMBO DZEMAFRIKA UTENYU NEMISANGANO SAYENYERI NEMISSTERI SHOPPING UZIMWE NEZVAKRISTU SPORT TEXTS OF MATTHIEU GROBLI URGENT / NEWS VIDEOS Web-TV